Afaka manoro hevitra ny mividy rindranasa avy amin'ny blaogin'ny serasera (PBN) ve ianao?
Raha ny amiko kosa, tsy afaka manoro hevitra aho, na manambara anao marina hoe iza no hotsapaina voalohany. Ny zavatra dia tsy mahatsapa ho toy ny Gray-Hat SEO aho, na mandà ny SEO Black-Hat. Ary ny fividianana rindran-damina avy amin'ny blaogin'ny tambajotra manokana dia sariohatra iray tsy misy dikany izay halan'i Google. Mino aho fa ny fividianana rindran-bola avy amin'ny blaogin'ny serasera (PBNs), na inona na inona fahombiazan'izy ireo amin'izao fotoana izao, dia mety ny fomba mora indrindra ahafahana maka ny sarany mavesatra loatra (mety tsy hiverina).
Na dia izany aza dia mbola malaza amin'izao fotoana izao ny bilaogy tsy miankina amin'izao fotoana izao, ary hitako koa ireo webmasters maro mpankafy maromaro mankafy ilay fifanarahana ary mahasoa amin'ny fandrosoana ara-boajanahary sy marefo amin'ny SEO. Inona anefa ny marina? Ahoana no handraisana fanapahan-kevitra tsara momba ny backlinks avy amin'ny blaogin'ny serasera? Andao hiezaka ny hanao ny zava-drehetra mazava - fotsiny amin'ny zava-misy mangatsiaka maromaro sy soso-kevitra fohy mba handanjalanjan-kevitra sy ny fiheverany. Raha ny zava-drehetra, dia ianao ihany no manapa-kevitra.
Backlinks avy amin'ny Blaogin'ny Network dia tsara ho an'ny:
Raha mifehy ny SEO, midika izany fa afaka mahazo tombony mahery vaika amin'ireo mpifaninana aminao ianao. Tsotra ny rehetra - mividy rohy avy amin'ny PBN dia midika fa afaka misafidy ny rohy tahaka ny adala ianao mba hijerena ireo safidy azo atao amin'ny rohy sy ny vatony. Eny, mampiavaka ny endrika manintona izany - satria tsy misy tetika hafa manome ny fahafahana hanamarina ny zava-drehetra amin'ny asa - eto sy ankehitriny.
Mandray soa avy amin'ny fahefana avo lenta, toy ny amin'ny PBN dia azonao ampiasaina ny tompon'andraikitra efa ela sy efa natokisanao efa misy amin'ny tranonkala efa misy - tsy misy ny fotoana. Ny fividianana backlinks avy amin'ny blaogin'ny tambajotra dia toa mahasarika kokoa, indrindra raha mihevitra fa ity karazana rohy ity dia sarotra kokoa ny manorina amin'ny fomba voajanahary.
Mamonjy fotoana sy ezaka be indrindra, noho ny sigara amin'ny PBN - tsy mila miara-miasa amin'ny fifampiresahana na fanorenana intsony ianao. Raha ny amiko, ny asa goavana toy izany dia ny mamantatra ireo fotoana mety hitranga amin'ny fifampiresahana dia mety ho ratsy indrindra amin'ny ezaky ny fotoana iasako hatramin'izay.
Raha toa ka mahavariana ny fotoana mahavariana ny PBN dia mandao ny varavarana mivoha izy ireo na dia faran'izay sarotra aza amin'ny fanamboarana rohy nentim-paharazana. Midika, ohatra, fa indraindray dia saika tsy azo atao ny manangona bakin'olom-borona avo be avy amin'ny taon-jato sy azo itokisana. Toa tsy azo tanterahina ny fanaovana izany na dia alohanao aza izany, farafaharatsiny raha tsy manapaka ny torolàlana. Na izany aza, ny fametrahana ny fotoananao sy ny ezaka amin'ny fananganana ny fifandraisana misy anao na ny fanentanana hafa azo henoina - dia tsy afaka manome anao ny zavatra andrasana na ny vokatra mialoha rehetra, tsy hiteny fandrosoana azo antoka amin'ny fiaraha-miasa maharitra.
Tsara, indreto misy zavatra ratsy indrindra momba ny backlinks avy amin'ny blaogin'ny tambajotra, ho an'ny fahafenoana. Amin'ny toe-javatra ratsy indrindra, ny fampiasana PBN ho an'ny fanorenana rohy dia mety hiteraka sazy an-tànana - indraindray dia afaka miditra any amin'ny farany izany rehefa mandany ny fandrarana tanteraka ny fikarohana. Tokony hitranga izany, tsy misy na inona na inona atao, afa-tsy ny fananganana tranokala na blôginao mampalahelo - hatrany am-piandohana Source .